Allgedo.com » Dilal kala duwan oo ka dhacay Magaaladda Kismaayo
Home » News » Dilal kala duwan oo ka dhacay Magaaladda Kismaayo Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen dilal kala duwan.
Ciidamo katirsan kuwa dowlada ayaa si bareer ah ugu dilay gudaha Magaaladda gabar lasheegay in ay ahayd mid dhagool ah.
Gabadhan ayaa lasheegay in ay ahayd mid dhagool ah, hase ahaatee askariga ayaa lahadlay oo yiri istaag, kadibna waa ay maqli weysay, waxaana uu la dhacay rasaas badan.
Dhanka kale Ciidamo katirsan kuwa Raaskambooni ayaa nin darawal ahaa ku dilay Magaaladda kadib markii ay soo qabten.
Lama oga sababta ay ninkaas udileen ciidamada, waxaase dadka ay sheegeen in markii ay nolol ku qabteen ay toogteen.
Dilalka noocaan oo kala ah ayaa kusii badanaya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose.